Fampitandremana momba ny dia ataon'ny Masoivoho amerikana: mandeha ny olom-pirenena amerikana sy ny mpizahatany!
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovaon'ny dia any Haiti » Fampitandremana momba ny dia ataon'ny Masoivoho amerikana: mandeha ny olom-pirenena amerikana sy ny mpizahatany!
Septambra 7, 2017
Ny masoivoho amerikana any Haiti dia namoaka fampitandremana momba ny dia androany ary nanentana ny olom-pirenena amerikana izy mba hiala ny firenena fa tsy handeha ho any Haiti. Alakamisy maraina tamin'ny 1 maraina tany Haiti ary nihidy ny masoivoho ary nialokaloka ny mpiasa miandry ny rivodoza Irma hamely ny nosy.
Ny fampitandremana dia nilaza fa ny olom-pirenena amerikana monina sy mandeha any Haiti dia tokony ho mailo amin'ny tondra-drano. Manoloana ny rivodoza manakaiky, dia misy fotoana voafetra ho an'ny fialana azo antoka amin'ny alàlan'ny rivotra. Ny Departemantam-panjakana dia nanome alalana ny mpiasa tsy vonjy taitra sy ny mpianakavy hiala ao Haiti mialoha ny oram-baratra. Manoro hevitra anay izahay ny handaozan'ny olom-pirenena amerikana an'i Haiti alohan'ny hahatongavan'ny rivodoza. Antenaina hikatona ny seranam-piaramanidina raha miharatsy ny fepetra. Noraràn'ny Masoivoho avokoa ny dia manokana ataon'ny olona any avaratry Port-au-Prince ary nofoanan'izy ireo ny drafitry ny dia ataon'ny mpiasa rehetra mandra-pahatongan'ny fandrahonana.
Ny olom-pirenena tsy afaka miala dia tokony hipetraka amin'ny toerana azo antoka.
Ny ivontoerana rivo-doza nasionaly (http://www.nhc.noaa.gov) dia mitatitra fa ny rivodoza Irma dia tafio-drivotra sokajy 5 mahery sy mampidi-doza misy rivotra mahery sy orambe. Navoaka ny famantaranandro momba ny rivodoza ho an'ny morontsiraka avaratr'i Haiti ary nisy fiambenana tafio-drivotra tropikaly natao ho an'ny faritra manomboka amin'ny Le Mole St. Nicholas ka hatrany Port-au-Prince. Mamporisika anao izahay hisoroka ny dia tsy ilaina rehetra mankany Haiti. Ny mpiasan'ny masoivoho sy ny fianakavian'izy ireo dia nomena baiko hialokaloka amin'ny toerana manomboka amin'ny 1: 00 pm ny alakamisy 7 septambra.
Hampihena ny mpiasa ny Masoivoho amin'ny Alakamisy ary Zoma, tsy manome afa-tsy serivisy vonjy maika ho an'ny olom-pirenen'i Etazonia.
Misy fampahalalana fanampiny momba ny Hurricane Irma amin'ny travel.state.gov ary avy amin'ny Haiti Civil Protection's tranonkala ary Twitter (amin'ny teny kreôla).
Bitsika iray misy ny lisitry ny fialofana: https://twitter.com/USEmbassyHaiti
Ny olom-pirenena amerikana dia tokony hampahafantatra ny fianakaviany sy ny namany any Etazonia ny misy azy ireo, ary hifandray akaiky amin'ny mpiasan'ny fizahan-tany, ny mpiasan'ny hotely, ary ny tompon'andraikitra eo an-toerana raha misy torolàlana momba ny fialana. Ny olom-pirenena amerikana mieritreritra ny ho tonga any Haiti mba hanampy amin'ny ezaka fanarenana aorian'ny rivo-doza dia tokony ho mailo fa ny hetsika toy izany dia ho sarotra tokoa raha tsy misy drafitra fandriam-pahalemana azo antoka, loharanom-pahefana tsy miankina iray, famatsiana sakafo, rano ary lasantsy, off- fiara fitaterana an-dàlana, ary fahaizana miteny Creole.
Raha mila vonjy taitra misy olom-pirenena amerikana ao Haiti dia miantso azafady 509-2229-8000.
Ny fampahalalana fanampiny momba ny rivo-doza sy ny fiomanana amin'ny tafiotra dia mety ho hita ao amintsika “Fantaro mialoha ny handehananao ny rivo-doza” pejy web, ary amin'ny “Loza voajanahary”Pejy an'ny tranokalan'ny Bureau of Consular Affairs.
Tena mamporisika anao izahay ny olom-pirenena amerikana rehetra izay mandeha na monina any Haiti hisoratra anarana ao amin'ny Departemantam-panjakana azo antoka amin'ny Internet Programme fisoratana anarana ho an'ny mpitsangatsangana (STEP). Ny fisoratana anarana STEP dia manome anao ireo fanavaozana farany momba ny fiarovana ary manamora ny fifandraisan'ny Masoivoho Amerikanina akaiky anao amin'ny vonjy maika.
ForwardKeys sy Skyscanner: fiaraha-miasa vaovao
Fanavaozana ofisialy ny fizahan-tany St. Kitts & Nevis taorian'ny rivodoza Irma